MyLann Foodie's Review #2 (Fatman Steak Bistro & Cafe) 1016 views
MyLann Foodie's Review #2 (Fatman Steak Bistro & Cafe)
MyLann သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးဘဲ Merry Christmas ပါလို့။
Christmas အတွက် စပါယ်ရှယ်
"MyLann Foodie's Review" အစီအစဉ် #2
*** Fatman Steak Bistro & Cafe
တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်ရဲ့ ညနေခင်းကို ဘယ်လိုနေရာမှာ ကုန်ဆုံးရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပေမယ့် အဖြေထွက်မလာပါဘူး.. ရောက်ဖူးပြီးသားဆိုင်မှာလည်း ထပ်မစားချင်တော့ဘူး.. အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ်စားချင်တာလေးကို www.MyLann.comမှာရိုက်ထဲ့ပြီး ရှာဖွေလိုက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ထွက်လာပါတယ်.. “FATMAN”တဲ့ !! အင်း.. ဒီဆိုင်ဆိုရင်တော့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ဝတုတ်ကြီး ဖြစ်တော့မှာပဲလို့ ထင်ရင် မှားသွားပါမယ်ရှင်.. ဆီတွေရွှဲနစ်နေအောင် ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းပွဲ၊ အစားအစာမျိုးတွေမဟုတ်လို့ အဆီတက်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနော်.. FATMAN ကတော့ Steak ကိုအဓိကထားရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. Pork Steak, Chicken Steak & Beef Steak၊ ပြီးတော့ Salad အမျိုးမျိုး၊ Burger အမျိုးမျိုး နဲ့ အဖျော်ယမကာ အမျိုးမျိုးလည်း ရနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးပါ.. Steak အားလုံးကို ၅,၅၀၀ - ၆,၀၀၀ ကျပ်အဖြစ် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားလို့ ဈေးသင့်တင့်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်..
ဆိုင်ထဲကို ဝင်ဝင်ချင်း မြင်တွေ့ရတဲ့ Decorationအားလုံးက လူကိုချက်ချင်း ဖမ်းစားပစ်လိုက်ပါတယ်.. စနေနေ့ညဆို Unplugged Showကို တွဲဖက်ခံစားနိုင်သလို Countryဆန်တဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကလည်း ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ.. X’mas နဲ့ New Yearအတွက် အထူးတလည်ပြင်ဆင်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..
Steak ဆိုရင် အမဲသားမှ စားချင်တတ်လို့ “Saikoro Beef Steak”ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်.. ခရမ်းချဉ်သီးကို မနှစ်သက်ပေမယ့် ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ ခရမ်းချဉ်သီးကို အဓိကထားတဲ့ “Insalata Caprese Salad” တစ်ပွဲမှာလိုက်ပြီး အအေးအတွက်ကတော့ “FATMAN Smile” တစ်ခွက်မှာလိုက်ပါတယ်..
“Steak” ရောက်လာပြီဆိုရင်ပဲ ဘိုစားပဲ ခပ်စိမ်းစိမ်းလေးကို ကောက်ဝါးကြည့်လိုက်တယ်.. စိမ်းစော်မနံပဲ ဝါးလိုက်ရင် ခပ်ကြွပ်ကြွပ်လေးဖြစ်နေတဲ့ ဘိုစားပဲတောင့်က ကျွန်မကို စတင်ဆွဲဆောင်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးနောက် အမဲသားတစ်ဖတ်ကို မြီးကြည့်တယ်.. အမဲသားရဲ့အညှီနံ့ ကင်းစင်နေရုံမကဘဲ တခြားဆိုင်မှာ စားခဲ့တုန်းက ကြမ်းရှရှ အထိအတွေ့မျိုးကိုလည်း မရမိပါဘူး.. သိပ်ဇီဇာကြောင်တဲ့ကျွန်မ အမဲသားတစ်တုံးစီကို ခရင်းနဲ့ထိုးကြည့်ပြီး အကျက်ညီမညီ၊ အနူးညီမညီ စမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်.. Steakကို အဓိကထားရောင်းတဲ့ဆိုင်မို့လို့လားမသိ အသားတုံးအားလုံးနီးပါး တပြေးညီထဲ နူးမြည့်နေပြီး အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံနေတာတွေ့ရပါတယ်.. ထို့နောက် လတ်ဆတ်မှုနဲ့အတူ ရနံ့သင်းသင်း Broccoli၊ ပြောင်းဖူးနုနု ချိုချို၊ အားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်တော့ စားလို့ကောင်းတဲ့၊ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ “Saikoro Beef Steak” ကို မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် စားခဲ့ရပါတယ်ရှင်..
ရိုးရှင်းတဲ့ “Caprese Salad”ရဲ့ အခြေခံက “Italian Flag”ရဲ့ အရောင်များဖြစ်တဲ့ အနီ၊အဖြူ နဲ့ အစိမ်းရောင် တို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ အင်တာနက်မှာ ဖတ်ရပါတယ်.. ဆလပ်ရွက်စိမ်းစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပေါ်မှာ အီတလီဒိန်ခဲ Mozzarellaကိုတင်ပြီး Olive Oil ဆမ်းထားတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Saladကလည်း အရသာထူးခြားနေပါတယ်.. ကျွန်မ စားလေ့စားထမရှိတဲ့ Saladကို ခုတော့ အကြိုက်တွေ့သွားပါပြီရှင်.. အားလုံးထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးက နောက်ဆုံးမှ ရောက်လို့လာပါပြီ.. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အဲ့လောက်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ပြီး အဲ့လောက်အရသာကောင်းနေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားခဲ့ဘူး.. “FATMAN Smile”ကို သံပုရာသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ နာနတ်သီးနဲ့ “ကြက်ဥအစိမ်း”တို့ကို ရောနှောပြီး ဖျော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.. “ကြက်ဥအစိမ်း”ပါတယ်ဆိုလို့ အညှီနံ့ထွက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတာ လုံးဝမှားပါတယ်ရှင်.. ညှီနံ့မထွက်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ကြက်ဥနဲ့ အသီးအနှံအားလုံး ရောစပ်လိုက်တဲ့အခါ အင်မတန်ထူးခြားကောင်းမွန်ပြီး ကတွင်းကိုရှင်းသွားစေတဲ့ အရသာကို ခံစားရစေပါတယ်.. ကိုယ်သောက်နေတဲ့ အအေးထဲမှာ ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး ပါနေတယ်ဆိုတာ ယုံနိုင်စရာမရှိလောက်အောင် အတွဲအစပ်က ကောင်းလွန်းလှပါတယ်.. ဗိုက်မဆံ့တဲ့ကြားက အအေးတစ်ခွက်လုံးကုန်အောင်သောက်ပြီး အပြုံးအကြီးကြီး ပြုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်..
ပျော်ရွှင်စရာ ညနေခင်းကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ FATMANကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်..
( စကားချပ် - သူငယ်ချင်း စားတဲ့ Cheese Chicken Burger ကိုလည်း ယူစားကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်.. အရသာကောင်းမွန်ပြီး အားရပါးရရှိလှတာကြောင့် Burger ကြိုက်သူများအတွက် ကွက်တိပါပဲလို့... အာလူးကြော်ကတော့ ဒီလိုပါပဲ၊ အရမ်းကြီးမထူးခြားပါဘူး။)
- MyLann Foodie တစ်ယောက် (Pop Corn)
Fatman Steak Bistro & Cafe
Hours: 7:00am to 11:00pm
Merry Christmas to all MyLann friends and families!!!
Christmas Special Episode
"MyLann Foodie's Review" #2
I couldn't figure out which place I should spend my Sunday evening by myself. I went ahead on MyLann.com and started searching foragood place to eat... resulting in "Fatman", hmm... according to the name alone, if you though you would gain more weight by dining at this place, then you would be wrong!! No need to worry about gaining fats because this place serves dishes low in oil and rich in vegetables...
Fatman is mainlyasteak house, serving different varieties of steaks, ranging from pork steak, chicken steak, salmon steak, tuna steak, and of course beef steak. They also serve different kinds of salads with lots of greens, burgers, andagood selection of cocktails. The price range of the steaks is from 5500 Kyats to 6000 Kyats, so I would say it's quiteafair price shop...
As soon as I entered the shop, the country style decorations with lots of interesting posters and chalkboard really intrigued me. I was informed that there is an unplugged show every Saturday night, which isagood addition. I also saw it was nicely decorated for upcoming X'mas and New Year...
When it comes to steaks, I am into beef ones, so I chose "Saikoro Beef Steak". Even though I'm not reallyatomato lover, this time, for new taste, I also ordered "Insalata Caprese Salad", which is based mainly on tomato slices. Foradrink, I chose "Fatman Smile"...My delicious looking steak came... the first thing that caught my attention was green beans, so I immediately ate one. It tasted fresh and little bit crunchy. Then, I had my first bite of beef steak... Oh! it was so juicy and not chewy like other steaks I had tried in Yangon...I amareally picky person when it comes to food, but I found out by poking all around the steak that the entire steak was well prepared and grilled to be tender and tasty with great smell.. Together with the fresh vege and corn that came with it, I had this faultless, delicious "Saikoro Beef Steak"...
I've read on the internet that "Caprese Salad" is simply based on the three colors, red, white & green, of the flag of Italy...Fatman's caprese salad is freshly decorated with slices of red tomatoes, green lettuces topped with white Mozzarella cheese and olive oil, looking amazingly delicious. I have never hadacaprese salad before, but I fell in love with that one...My favorite one came at last. I was very glad that I made the rightest choice of all... This fabulous "Fatman Smile" is made of lime, strawberry, pineapple, and raw egg mixed together!!! Raw egg??? But, no worry at all, because raw egg mixed with all those fruits gaveafragrant smell andagood feeling down my throat...It was just an unbelievably great mix of things...
Even though I was stuffed because of my main dishes, "Saikoro Beef Steak" & "Insalata Caprese Salad", I could easily finish the entire glass of "Fatman Smile" withabig fat smile on my face..
Thanksalot, Fatman Steak Bistro & Cafe, for giving meawonderful Sunday evening...
(P.S: I also tried little bit of "Cheese Chicken Burger" from my friend's plate as well, and it wasavery satisfying bite...French fries was just okay, nothing special though...)
-aMyLann Foodie (Pop Corn)
No.26(A), Bo Yar Nyunt Street